नेपाल नयाँ क्रान्तिको युगमा छ : प्रचण्ड - Naya Patrika
नेपाल नयाँ क्रान्तिको युगमा छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ | फागुन ०१, २०७४
माओवादी केन्द्रले २३औँ जनयुद्ध दिवस धुमधामसँग मनायो । राजधानी काठमाडौंसहित सातै प्रदेशमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा कार्यक्रम भए । यसपटक जनयुद्ध दिवसको संयोजन गरेको वाईसिएल नेपालले माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केन्द्रीय कार्यक्रम राखेको थियो । कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरे ।
साथै, पार्टीका नेता रामबहादुर थापा वादल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत पनि थिए । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, जनसांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पनि कार्यक्रममा धारणा राखे । अभिव्यक्तिका सार थिए, जनयुद्धलाई अब एउटा पार्टीको मात्र नभई सबै कम्युनिष्टको उत्सवक रूपमा तथा राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइनुपर्छ ।
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘नेपाल नयाँ क्रान्तिको युगमा रहेको भन्दै लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो दायरा, धेरै जनता र धेरै कार्यकर्ता र धेरै ठूलो मलिलो जमिन चाहिएको छ । त्यसका निम्ति नेपालका सबै कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा ल्याउने र ति सबैको केन्द्र बनाउने भूमिका हामीले पूरा गर्नुपर्ने छ ।’ जनयुद्ध दिवसको उनको सम्बोधन यस्तो थियो…
२०५१ साल फागुन १ गते जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने र नेपाली समाजलाई समाजवादसँगै साम्यवादको दिशामा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ विद्रोहको झण्डा उठाएको २३ वर्ष बितेछ । हामी भर्खरको युवा हुँदा जनयुद्ध गर्ने, सशस्त्र संघर्ष गर्ने, सामाजिक परिवर्तनको निम्ति हतियार उठाउने जमर्को २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनभन्दा अगाडि नै गरेका थियौँ । तर, देशको राजनीतिक परिस्थिति, तत्कालीन निरंकुश पञ्चायतकाविरुद्ध सम्पूर्ण तागतको साथ सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो । त्यसकारण, अहिले के सम्झिएको छु भने– म त्यतिबेला भर्खरै सानो पार्टीको महामन्त्री थिएँ । देशमा सशस्त्र संघर्ष सुुरु गर्ने कि ? ठूूलो जनआन्दोलनमार्फत् सहभागी हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भयो ।
त्यतिबेला केही हतियार जम्मा गरिएको र तालिम लिइसकिएको थियो । म नै सशस्त्र संघर्षको प्राविधिक प्रमुख पनि थिए । पार्टीको पनि प्रमुख भएपछि हाम्रो अगाडि प्रश्न खडा भयो । छापामार युद्ध सुरु गर्ने कि ? जनआन्दोलनमा सहभागी भएर पञ्चायत ढाल्ने ? मैले त्यतिबेला सोचेर पार्टीमा प्रस्ताव गरेँ– यतिबेला छापामार युद्ध गर्नु भनेको पञ्चायतलाई सहयोग गर्नु सरह हो ।
अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलन आपसमा समायोजित भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आयौँ । संविधान निर्माण गरेर उत्पीडित जाति क्षेत्र समुदायलाई केही अधिकारहरू दिइएको छ । उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ठाउँसम्म हजारौँ सहिदको रगतको मूल्यमा र लाखाैँ जनताको योगदानमा अहिलेसम्म आइपुगेका हौँ । २०औँ शताब्दीको अन्त्य र २१औँ शताब्दीको सुरुभएसँगै हामीले गरेको जनयुद्ध महान क्रान्ति थियो ।
अहिलेको परिवर्तनमा जनयुद्धको देन छ । म यो कुरा किन भन्दैछु भने आजको दिनमा नेपाल नयाँ क्रान्तिको युगमा छ । हामी नयाँ जनवाद जिन्दावाद होइन, समाजवाद जिन्दावादको नारा लगाएर नेपाली समाजका क्रान्तिका अधुरा कामहरू, सहिदका अधुरा सपनाहरू, बेपत्ता योद्धा र घाइते अपांगता भएका र नेपाली जनताको अधुरा सपनाहरू पूरा गर्ने अभियान नयाँ समाजवादी अभियानको तरिकाद्वारा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । जसका लागि ठूलो दायरा, धेरै जनता र धेरै कार्यकताको आवश्यकता परेको छ । अब धेरै ठूलो मलिलो जमिन चाहिएको छ ।
हामी दुई वटा पार्टी एकताको छलफलमा छौँ । हाम्रो कुरा हुँदा हामीले के भनेका थियाैँ भने र अर्को पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के कुराको महत्व स्वीकार्नुभएको छ भने– ‘नेपालको सामाजिक राजनीतिक जागरणमा जनयुद्धको ऐतिहासिक भूमिका थियो र छ । र, जनयुद्ध दिवसकै दिन पार्टी एकतालाई टुंग्याउन सकियो भने मलाई खुसी हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।’ हाम्रो कोशिस छ सकेसम्म आज नै टुंगोमा पुगोस् । र, सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीको चुनौती नेपालबाट हटाउन सकियोस् ।
म कमरेड विप्लवलाई त्यस्तो दिवासपनाबाट बुउँझिन आग्रह गर्छु । दिवा सपना देखेर मात्र केही हुँदैन, सपना धरातलमा टेकिएको हुनुपर्छ, विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । रहर र लहडबाट क्रान्ति हुँदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने दुनियाँ अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो । त्यसका म कमरेड विप्लवलगायतलाई एकठाउँमा बसेर छलफल गर्न र एउटा शक्तिशाली कम्युनिष्ट केन्द्र बनाएर राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्न अपिल गर्न चाहन्छु ।
नेपालमा समृद्धि पनि समाजवाद पनि हामी एक साथ अगाडि बढाउने असाधारण परिस्थिति यतिबेला नेपालमा छ । यसलाई भत्काउनका लागि संसारभरका साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादीहरू अहिले लागेका छन् । तपाईंहरू साम्राज्यवादको पक्षमा कि जनताको पक्षमा ? भन्ने कुरा तपाईंको व्यवहारबाट टुंगिने कुरा हो । तपाईं यो महान् अभियानमा जुटेर समाजवादको अभियानमा लाग्नुभयो भने तपाईं जनताको हुनुभयो । यसलाई भत्काउन चाहने, कम्युनिष्टहरू एकतावद्ध नहुन्, वामपन्थीहरू एकतावद्ध नहुन् भन्ने चाहने प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने पुर्‍याउने गरी काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि तपाई जनताको मान्छे होइन । विज्ञानले त्यही भनेको छ । त्यसकारण म फेरि एकपटक बनेको वातावरण र पाएको अवसर नगुमाउन अनुरोध गर्छु ।
यस्तो अवसर र वातावरण सधैँ आउँदैन । हामीलाई पनि २०४६ सालभन्दा अगाडि नै जनयुद्ध गरेर क्रान्ति गर्ने मन थियो, रहर थियो । तर, रहरले हुँदोरहेनछ । ०५२ साल फागुन १ नै पर्खिन पर्‍यो । एकता केन्द्र नै बनाएर जान पथ्र्यो । अहिले पनि कुरा त्यही हो । नियम विज्ञान त्यही नै हो । त्यसकार म सबै यो अवसर नगुमाउन चाहन्छु । यस महान् दिनमा नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने फेरि अवसर हामीलाई आएको छ । नेतृत्व भन्ने कुरा दिनुपर्छ भनेर पाइने होइन । आफ्नो सक्रियता, क्षमता, त्याग र तपस्याद्वारा लिनुपर्ने कुरा हो । हामीले गरेको जनयुद्ध, त्यसपछिको जनआन्दोलन र त्यसको जगमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र हामीले नै प्रस्ताव गरेको वाम गठबन्धनसँगै पार्टी एकता एउटा अवसर हो । यसलाई गुम्न नदिऊँ ।